गाउँपालिकामा दलीय भागबन्डा ! मिलेन भाग, राेकियाे अधिवेशन — samadhannews.com
गाउँपालिकामा दलीय भागबन्डा ! मिलेन भाग, राेकियाे अधिवेशन
नेकपा र कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिलेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन स्थगित भएको छ । कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङमा शुक्रबार सुरु अधिवेशन नेतृत्व होडबाजीले शनिबार स्थगित भएको हो ।
अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै शनिबार ताङतिङ घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, महासंघ नेतृत्वमा पार्टीगत कुरा नमिलेपछि शनिबार बिनानिष्कर्ष अधिवेशन स्थगित भएको हो । कांग्रेस र नेकपा दुबै पार्टीका तर्फबाट नेतृत्वमा दाबी थियो । ठूलो पार्टीबाट अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानमा व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार प्रदेशका स्थानीय तहमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेपछि ईश्वरराज पाण्डे संयोजक र तत्कालीन एमालेबाट राजु पौडेलललाई सहसंयोजक तोकिएको थियो । महासंघको पहिलो अधिवेशनमार्फत नयाँ समिति नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेस दुबै पार्टीको दाबी थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेकपा ठूलो पार्टी बनेको भन्दै नेतृत्वमा दाबी ग¥यो भने कांग्रेसले पनि दाबी छोडेन।
गण्डकी प्रदेशमा ५८ गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक जना कार्यपालिका ससदस्यले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने महासंघको विधानमा छ । २९ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र २५ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ । २५ गाउँपालिका अध्यक्ष र २७ जना उपाध्यक्ष तत्कालीन एमालेले जितेको छ । तत्कालीन माओवादीले ३ अध्यक्ष र ८ उपाध्यक्ष जितेको छ । जनमोर्चाको १ गाउँपालिका अध्यक्ष र २ उपाध्यक्ष छन् ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसका ५४, एमाले माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको ५७, जनमोर्चा ३ र स्वतन्त्र २ गरी १ सय १६ जना छन् भने एक जना सदस्य गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो हिसाबले ल्याएका थिए ।
दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपा प्रदेशको ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसकिने नेकपाको दाबी थियो । ‘नेकपा प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्ने मनसायसहित अधिवेशनमा गएको थियो । आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै नेतृत्व अरुलाई सुम्पने कुरा हुँदैन,’ तदर्थ समितिका सहसंयोजक राजु पौडेलले बताए ।
कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षको दाबी गरिरहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले दुई तिहाईको केन्द्रीय सरकारको दम्भले महासंघको अधिवेशनमा पनि नेकपाले विधि मिच्न खोजेको बताए । ‘सहमतिमा अधिवेशन टुंगोमा पुग्थ्यो । नेकपाको दम्भले स्थगित भयो,’ कुँवरले भने, ‘यस्तै हो भने समानान्तर अर्को महासंघ खोल्छौं ।’
२०७४ असार १० गते पोखरा भेलाले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यतिबेला संयोजकमा कांग्रेस र सहसंयोजकमा एमालेलाई गरी १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ७ सदस्य कांग्रेस, ६ सदस्य एमाले र २ सदस्य माओवादी केन्द्रबाट भागबन्डा लगाइएको थियो । अब छलफल र वार्ताबाट सहमति गरेर अघि बढ्ने तदर्थ समिति अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।